पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै रोशीको तीनधारे झरना – Radio Roshi
in ग्यालरी / समाचार — by Roshikhabar —	September 14, 2020
रोशी गाउँपालिकाको वडा न २ मा रहेको तीन धारे झरना पर्यटकको आकर्षण केन्द्र बनेको छ । करिब तीन हप्ताको बीचमा १० हजार भन्दा बढी उक्त झरना पुगेका छन ।
झरनाको अवलोकन गर्न जाने बढेसँगै स्थानीयहरुले रोजगारी समेत पाउन थालेका छन । यहि उत्पादन भएको हरिया मकै, काक्रो, दही लगायतले बजार पाएको छ । भने ठाउँ ठाउँमा चनाचटपटे, पानी पुरी लगायत जङफुडका पसलहरु पनि खुलेका छन ।
रोशी गाउँपालिका वडा न २ का स्थानीय पेम्मा लामाले केही हप्ता देखी दैनिक दुई देखी तीन सय मोटरसाइकल लगायतका सवारी साधन आउने क्रम बढेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार परिवार सहित जाने पनि बढेका छन ।
लकडाउनका कारण लामो सयम देखी कतै पनि घुमघिर गर्न नपाएका आन्तरिक पर्यटकको रोजाई तीनधारे झरना हुन पुगेको छ ।
अहिले जिल्लाभर नै यही झरनाको चर्चा हुन थालेको छ । आन्तरिक पर्यटकहरु झरना र वरपरको सुन्दर मनोरम दृष्य अवलोकन गर्न पुग्ने गरेका छन् । हुन त वि.सं. २०२८ सालमा नै पर्यटन विभागमा सूचिकृत भै सकेको तीन धारा झरना प्रचारप्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको थियो । यसैक्रममा रोशी गाउँपालिकाले १२ वटै वडाका पर्यटक स्थलको चिनारी गराउने गरी हालै निकालेको निलमबरी नामक पुस्तकले ओझेलमा परेको पर्यटकीय स्थलको उजागर गरेसँगै ओझेलमा परेका स्थलमा आन्तरिक पर्यटक जानेक्रम बढेको छ ।
रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष डीबी लामा रोशी पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बनाउने तर्फ गाउँपालिका लागि रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले पालिकाका १२ वटै वडामा केही न केही विशेषता रहेका पर्यटकीय स्थल रहेको बताउनुभयो ।
रोशी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्बरु दाहाल यही हप्ता गाउँपालिकाका इन्जिनियर सहित तीन धारे झरना पुगेर फर्किनुभयो । चर्चाको शिखरमा पुगेपछि त्यहाँको अवस्था र पालिकाबाट गर्न सकिने योजना बनाएर उहाँको टोली फर्किएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष लामाले तत्काल सिढी बाटो व्यवस्थापन गरिदिने, होमस्टे खोलन स्थानीयलाई प्रोत्साहन गर्ने गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने लगायतका बिशेषमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
रोशी गाउँपालिका वडा न २ का अध्यक्ष पोते लामाले तीन धारे झरनासँगै नाग दह, महाभिर झरना र रानी झरना समेत रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै वडा न १ का वडा अध्यक्ष श्रीदास लामाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षकको केन्द्र तीनधारे झरना बन्ने बताउनुभयो ।
झरना घुम्न, हेर्न आउने पर्यटकहरुको संख्या दिन प्रति दिन बढ्दै गएको हुनाले झरनासम्म पुग्ने पैदल मार्गलाई सुरक्षित बनाउनु पर्ने स्थानीयको भनाई छ ।
झरनामा प्लास्टिकजन्य फोहोरहरु, साबुन प्रयोग जस्ता कार्यहरुलाई ब्यबस्थित गर्न र सम्भावित दुर्घटना हुन नदिनको लागि स्थानीय प्रहरी चौकिबाट प्रहरी खटाउनु पर्ने स्थानीयको माग छ ।
कसरी पुग्ने तीनधारे झरना:
तीनधारे झरना जान बीपी राजमार्गको चौकीडाँडा, भकुण्डेबेशी र काभ्रेभञ्ज्याङबाट जान सकिन्छ । मोटरसाइल वा अन्य सवारी साधनबाट उक्त क्षेत्रमा पुग्न सकिने स्थानीयले बताएका छन । धुलिखेलबाट बीपी राजमार्गबाट काभे्र भञ्ज्याङ चोकबाट दाहिने तर्फ अगाडि बढ्न सकिन्छ । त्यहाँबाट फुलबारी हुदैँ विश्वप्रशिद्ध नमोबुद्ध स्तुपा, गुम्बा हुँदै अगाडि बढ्नुपर्ने छ ।
श्यामपाटीबाट कपरढुङ्गा, पुरानो गाँउ हुँदै पूर्वको गेटको रुपमा परिचित नेवार जातको बस्ती रहेको दाप्चा बजार पुग्न सकिने छ । माथिल्लो हटिया पुगे पछि दाहिने तर्फबाट ओरालो झर्दै नेपाने हुँदै गहत्ते भएर वा बाघमारा भन्ज्याङ, दारिमबोट, पिपलटार हुँदै रोशी गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३ को संगमस्थलको रुपमा परिचित फलामेसाँघु पुग्न सकिन्छ ।
फलामेसाँघुबाट नारायणटार, पुरानोगाँउ, भुसुने भएर काफल डाँडा पुग्न सकिन्छ भने चण्डी डाँडा, गुम्बागाँउ हुँदैै पनि काफल डाँडा सम्म पुग्न सकिन्छ । फलामेसाँघुबाट करिब ४५ मिनेटको यात्रामा काफलडाँडा पुगि सकेपछि पैदल यात्राबाट करिब २५ मिनेट जति प्राकृतिक मनमोहक दृष्य अवलोकन गर्दै झरना पुग्न सकिन्छ ।